”Waxaa socdaa waa khalad!” – Midowga Musharrixiinta oo aad u saluugey hannaanka ay ku socoto doorashadu | Hadalsame Media
Home Wararka ”Waxaa socdaa waa khalad!” – Midowga Musharrixiinta oo aad u saluugey hannaanka...
”Waxaa socdaa waa khalad!” – Midowga Musharrixiinta oo aad u saluugey hannaanka ay ku socoto doorashadu
(Muqdisho) 25 Nof 2021 – Xubno ka tirsan Golaha Midowga Musharaxiinta oo Muqdisho ku kulmay ayaa aad loogu saluugey hannaanka ay ku bilaabatay kuna socoto doorashada dalku.
Musharaxiinta ayaa isla falanqeeyey cabashooyinka iyo walaaca ka taagan doorashooyinka haatan dhacay ee labada aqal oo aan ku soconin hab-raacii saxda ahaa ee loo dejiyey.
Daahir Maxamuud Geelle oo ku hadla afka Midowga Musharrixiinta ayaa warbaahinta u sheegay in si ay haatan wax ku socdaan ay dalka ka ridayso burbur baahsan oo aan la mahdin.
“Waxaa rabnaa in bulshada Soomaaliyeed iyo aduunka intiisa kale la wadaagno waxaa si buuxda ugu qanacsanahay sida ay ilaa hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara ay tahay bur bur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsada, oo aan rabin in uu dhaco anaga oo nool oo wax ka qaban karo,” ayuu yiri Md Geelle.
Wuxuu intaa daba dhigay in doorasho-boobka haatan socdaa uu dalka gaarsiinayo gaarsiin doono meel xun, islamarkaana aysan marnaba aqbali doonin oo ay uga gudbi doonaan hannaan midkan ka gedisan.
“Midowga Musharaxiinta waxa uu sameyn doonaa kulamo joogto ah maalmaha soo aaddan dhacaya, kuwaasoo uu uga tashanayo samata-bixinta bulshada Soomaaliyeed oo hannaanka boobka iyo burburinta looga samatabixinayo.” ayuu ballan qaaday.
Waxa uu ugu baaqay bulshada, Odayaasha dhaqanka iyo Saraakiisha ciidanka, in laga wada qayb qaato wax ka qabashada arrintan oo uu ku tilmaamay mid khaldan oo u baahan in meel looga soo wada jeesto.
Previous articleMaxay AC Milan u baahan tahay si ay ugu soo baxdo wareegga 16-ka ee CL?!!
Next article”Qiyaas ilmo aad juhdi gelisey oo aad dugsi u dirtay ee lagu yiri waa la qarxiyey!” – Mid ka mid ah waalidiinta ilmaha Dugsiga Mucasir + Sawirro